Sina Runjin © Krunt ™ -RM35 Famokarana sy fananganana milina gilasy | Runchen
Famolavolana mialoha ny paika
Milina fanala gilasy
Fanosotra amin'ny gilasy sy ny tsipika fanendasa
Masinina famenoana gilasy gilasy
Masinina fanoratana gilasy
Fangaro amin'ny voankazo
Tunnel helix indroa
Manontania izao Download
Ampiasaina amin'ny famokarana gilasy mandeha ho azy miaraka amin'ny bar, ice-lolly na ranom-boaloboka.
Ireto no dingana enina manaraka ireto:
1 Araraka ao anaty kaopy bobongolo ny gilasy
2 Atsofohy ao anaty gilasy ny bar
3 Asiana hatsiaka ao anaty rano mangatsiaka mangatsiaka ny gilasy amin'ny -40 ℃
4 Atsoniho kely ny lalan'ny gilasy amin'ny rano masira amin'ny + 15 ~ 25℃
5 Sintomy amin'ny kaopy bobongolo ny gilasy
6 Atsaharo ny milina fanosotra
Mandritra ny fomba fitaterana manomboka amin'ny fivoahana mankany amin'ny fanamaivanana, ny sokola sôkôla dia azo kosehina amin'ny tampon'ny gilasy. Rehefa mihosotra amin'ny sôkôla ny gilasy, dia azo saronana amin'ny tany koa ny voankazo maina.
fahaizany Fat 10%
Ny fahaizan'ny vokatra mahazatra dia Vovon-dronono tsy matavy 10.5%
amin'ny ankapobeny 21000 hatramin'ny 36000 isan'ora. The Siramamy (sukrosa) 12,0%
ny fahaizan'ny vokatra ranomandry rano dia manodidina ny 20% Syrup glukose 5.0%
ambany noho ny an'ny gilasy. Ny tena izy Additive 0,5%
ny fahaiza-manao dia iharan'ny anton-javatra sasany ao anatin'izany: Zava-misy henjana tanteraka 38,0%
l Laharana isan'ireo lasitra gilasy Water 62,0%
l Quantity an'ny gilasy isaky ny laharana Total 100%
Ny kaopy bobongolo namboarin 'ny gilasy mangatsiaka dia napetraka amin'ny latabatra boribory boribory ary apetraka amin'ny fitoeran-drano masira. Ny lasitra bobongolo dia vita amin'ny vy vy. Ao amin'ny lasitra bobongolo mahazatra, misy kaopy bobongolo 16 isaky ny andalana, ary ny habetsaky ny kaopy bobongolo dia 16x126 = 2016. Ny hatevin'ny vokatra ambony indrindra mifanaraka amin'ny 126 andalana kaopy bobongolo dia 24 mm. Ny vilany lasitra amin'ny famaritana hafa dia azo omena ihany koa (jereo ny "fampitaovana tsy voatery").
Ny vilan'ny lasitra RM35 dia afaka mamokatra gilasy lava indrindra amin'ny halavany 144 mm (5.67 "). Ny bara vita amin'ny gilasy na gilasy dia tokony ho eo ambonin'ny lasitra bobongolo farafahakeliny 30 mm (1.18 ").
Ny fitoeran-drano masira boribory dia misy rindrina vy tsy misy fangarony indroa miorina ary omena ny Mazava ho azy. Twoequipped amin'ny paompy centrifugal tsy miankina. Misy fitaovana iray mifehy ny mari-pana hisorohana ireo fitaovana famoahana miasa amin'ny hafanana ambany loatra. Ny mari-pana amin'ny rano masira mafana dia tsy maintsy ferana ambany 25 degre amin'ny fotoana rehetra mba hiarovana ny lasitra amin'ny tsindry hafanana be loatra.
Rafitra mitondra fiara lehibe
Ny fiasa lehibe rehetra dia tanteraky ny rafitra fehezin'ny cam. Ny asan'ny mpanampy sy ny fiasa hafa mila hery voafetra dia fehezin'ny rafitra rivotra voatazona. Ny hafainganan'ny 35 ny rafitra dia mety 10 andalana hatramin'ny 30 andalana isan-minitra.
Ny fitaovana elektrika dia napetraka ao anaty kabinetra elektrika tsy miankina tsy miankina, ao anatin'izany ny breaker lehibe, ny breaker, ny starter an'ny maotera voaaro, ny relay mifehy mba hifehezana ny fanafanana, ny transformer hifehezana ny herinaratra sy ny timer
Ny hetsika dia fehezin'ny tontonana fanaraha-maso napetraka eo amin'ny masinina. Ny fiasa rehetra dia fehezin'ny PLC. Tena mandeha ho azy izy io. Ny tontonana fanaraha-maso dia misy ny bokotra, tondro ary fampisehoana nomerika hanehoana ny hafanana sy ny hafanan'ny rano mangatsiaka mangatsiaka. Ny mari-pana amin'ny rano masira mafana dia fehezina elektronika ary aseho amin'ny takelaka fanaraha-maso. Ny fampisehoana iray izay afaka mampiseho tarehimarika sy isa dia afaka manome ny fampahalalana momba ny fandidiana sy ny diagnostika. Eo koa ny fanairana amin'ny feo. Raha ilaina dia ambaratonga lehibetokony omena.
Fitaovana fanadiovana sy fanamorana
Mba hanadiovana sy hanaparitahana ny lasitra bobongolo ao amin'ilay tranokala, dia misy fitaovana fanadiovana napetraka eo amin'ny lalantsara mpanohana ny fitoeran-drano masira. Ny fitaovana dia tokony ampifandraisina amin'ny rano, etona ary mpandraharaha fanadiovana.
Ny rafi-pamangatahana voalohany dia tsy misy ny evaporator ampiasaina amin'ny fifanakalozana hafanana amin'ny rano masira. Amoniaka dia ampiasaina ho coolant. Ny rafitra fanamafisana faharoa dia rafitra fandroana rano mangatsiaka mangatsiaka. Ny rano mangatsiaka mangatsiaka dia mivezivezy miaraka amin'ny paompy axial. Ny tanky fizarana rano mangatsiaka mangatsiaka dia vita amin'ny vy vy.
Ny rano masira mafana diafanaina amin'ny herinaratra na etona. Ny ampiasaina dia tokony misafidy iray rehefa manafatra. Ny rano masira dia atondraka amin'ny tarehy ivelany amin'ny kaopy bobongolo amin'ny alàlan'ny rafitra fitifirana. Ny rafi-pandotoana dia
ny fifandraisana amin'ny solosaina amin'ny solosaina fanaraha-maso afovoany dia azo omena hisolo ny PC mahazatra (jereo ny "equipment opsional").
Ny fitaovana famenoana gilasy mahazatra dia natao ho fitaovana famenoana be dia be amin'ny karazana amponga, izay ampiasaina hamenoana ireo fitaovana avy any ambony. Ahitana fantsom-by sy lohana famenoana. Ny fitaovana famenoana napetraka etsy ambony dia azo atakalo.
Masinina fanaovana bara tanana
Avy hatrany dia mampiditra bar ao anaty gilasy izy io. Ny fametrahana ny bara dia vita tanana. Anisan'izany ny boaty fitehirizana ny fitehirizana bara.
Ny fitaovana dia misy mpampitohy rojo mahitsy. 56 ny famoahana fitaovam-piadiana miaraka amina clamp barazy ao amin'ilay fitaovana. Ny fametahana dia vita amin'ny vy mafy / vy tsy misy fangarony. Ny famoahana ny vokatra dia vita amin'ny alàlan'ny fihetsiketsehana mankany ambany amin'ny sandry manafaka, ary ny vokatra dia entina mankany amin'ny milina fonosana. Ny fitaovana famoahana mivantana dia azo fidiana (jereo ny "equipment opsional").
Fitaovana firakotra sôkôla
Ny fitaovana dia apetraka amin'ny dingana manaraka amin'ny famotsorana fitaovana. Anisan'izany ny fitoeran-tsavony manondraka sôkôla sy vilany fandraisana miaraka amina bar bà. Ny haavon'ny tanky soak sôkôla dia azo ahitsy arakaraka ny fepetra takiana amin'ny haavon'ny savony sôkôla. Tavy sôkôla ivelany sy paompy boribory
Fitaovana tsy voatery
01 Fitaovana famenoana gilasy miloko iray
03 Fenoy fitaovana mihetsika
04 gilasy feno mololo feno ambany
05 gilasy miloko miisa roa mijoro mitsivalana fitaovana famenoana
06 Ny gilasy misy loko marolafy mizara roa "zebra zaridaina" fitaovana famenoana
07 Fitaovana famenoana gilasy misy gilasy roa
08 Ny gilasy misy loko marindrano roa nozaraina marindrano
09 Fitaovana famenoana ranom-boankazo miloko 09 mahaleo tena
Fitaovana famenoana gilasy 10 miaraka amin'ny akorandriaka feno ranomandry rano sy ivon'ny gilasy
Fitaovana famenoana ranomandry miloko iray. Ny vokatra isaky ny andalana (radial) dia misy loko roa samy hafa (na loko telo na efatra)
12 Rano misy ranomandry misy loko roa mizara mitsivalana fitaovana famenoana
Fitaovana famenoana gilasy feno fenila 13
Fitaovana famenoana ranomandry 14 vovo-oram-panala, ao anatin'izany ny fampitaovana mihetsika sy famenoana fijanonana fitaovana
15 gilasy maina mifono (miaraka amin'ny voankazo maina toy ny voanjo sy vatomamy)
16 Fitaovana famenoana gilasy feno viscosity feno-ambany feno etona
Toeram-paompy 18 misy tanka sôkôla an'ny
Fahaiza-manao 100 L, palitao rano misy hafanana elektrika sy fiasan'ny fifehezana hafanana mandeha ho azy ary paompy mivezivezy sôkôla elektrika Ny tanky dia omena kodiarana castor mihetsika ary mifandray amin'ny fantsom-bokatra RM35.
21 Carbon vy na vy tsy fitehirizana vy fitahirizana vilany
22 Fanaka fanampiny ho an'ny famokarana roa taona
23 Exchanger hafanana rano mangatsiaka ivelany
Fantsam-pifandraisana 24 mifandray amin'ny solosaina afovoany
25 lasitra amam-boasary miaraka amin'ny kaopy bobongolo samihafa sy ny fanamboarana isa laharana
Fitaovana entin'ny mekanika 26 hamoaka mivantana ny milina famonosana maro
Fiara lehibe 3 kW (4 HP) Paompy masira mangatsiaka 11 kW (14.8 HP) Paompy masira mafana 1.1 kW (1.5 HP) Siny ahazoana sôkôla 0,8 kW (0,5 HP) Fitaovana fanamainana maina 1.1 kW (1.5 HP) Motera pump vacuum 2.2 kW (3 HP)
Ny fanamainana ny rano masira mafana dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fanamafisana herinaratra na fanafanana etona. Tokony hohamafisina rehefa manafatra ny mpampiasa.
Vokatry ny fametrahana farafaharatsiny
Fifandraisana elektrika mahazatra 3x380 V, 50 HzAC Misy laharana 180 Amps
Mpanapaka lehibe 250 Amps
-Ny lasitra fanamainana ny haba mamoaka 20 KW
-Ny bobongolo fanamafisana herinaratra mamoaka 101 KW setroka ambany 100 KG / H fanjifana farafahakeliny amin'ny famokarana 55 ~ 75% 150 L kaontenera sôkôla 3 KW
Ny tariby herinaratra lehibe dia mifanaraka amin'ny famaritana eo an-toerana.
Paompy mivezivezy fantsona famatsian-drano masira:
Fantsona fidirana anaty rivotra maintso:
Ny savaivon'ny savony gilasy dia tsy latsa-danja noho ny savaivony avoakan'ny milina fanala.
Fanjifana rivotra voafehy
Masinina mahazatra 0,9 m3/ min
Fanerena asa ambany 7 BAR Teboka ando avo indrindra mifanaraka amin'ny tsindry atmosfera +5 ℃
Ny mari-pana miasa mahazatra Ny hafanana miakatra -45 ℃ Ny maripanan'ny rano masira mangatsiaka -40 ℃ Ny maripanan'ny rano masira mafana +20 ℃
Fahaizan'ny evaporator 325 KW 279000 Kaloria isan'ora farafahakeliny amin'ny -45 ℃
Amin'ny satan'ny "vonona hiasa" manodidina ny: 24000 kg
Data momba ny fandefasana
Lanja milanja 16350 kg
Lanja mavesatra 20500 kg
Milanja tanteraka 3200 mm
Ny haavon'ny lasitra bobongolo mankany amin'ny tany 1660 mm Mila toerana malalaka amin'ny tany hatramin'ny valindrihana
Previous: Runjin © Krunt ™ -EX800 Extrusion and Slicing Line ho an'ny gilasy
Manaraka: Runjin © Krunt ™ -2000 Masinina afangaro amin'ny voankazo
Tsy nahita izay tadiavinao?
Avelao izahay hanampy anao!
Runjin dia manolo-tena amin'ny fitaovana tsara kalitao sy serivisy tsara ary fanohanana ara-teknika. Manantena ny safidinao amin'ny Runjin izahay.
Adiresy: No.88, Jianshe Road, Sixiang Street, Hailing District, Taizhou City, 225300, P, R. Shina
Telefaona: +86 0523 86818810
Teny lakile A, Teny lakile B,